Ọ dị mkpa maka ndị na-ere ahịa ka ha guzobe 1: 1 njem na ndị ahịa na ọnụ ọgụgụ, ngwa ngwa na nke ọma. Otu n'ime usoro mgbasa ozi a na-ejikarị eme ihe maka ebumnuche a bụ Salesforce Marketing Cloud (SFMC).
SFMC na-enye ohere dị iche iche ma jikọta multifunctionality ahụ na ohere na-enwetụbeghị ụdị ya maka ndị na-ere ahịa iji jikọọ na ndị ahịa n'ofe ọkwa dị iche iche nke njem ndị ahịa ha. The Marketing Cloud ga-, dịka ọmụmaatụ, ọ bụghị nanị na-enyere ndị na-ere ahịa aka ịkọwapụta ụdị data ha, kamakwa ọ nwere ike zuru oke iji jikọta ma ọ bụ bulite ọtụtụ isi mmalite data, nke a maara dị ka ntinye data.
A na-ekwu na nnukwu mgbanwe mgbanwe nke SFMC na-enye bụ na ọtụtụ ọrụ na Marketing Cloud na-agba ọsọ site na ajụjụ SQL. Ọrụ ịzụ ahịa dị ka nkewa, nhazi onwe, akpaaka, ma ọ bụ ọbụna mkpesa chọrọ ajụjụ SQL dị iche na Marketing Cloud maka ndị na-ere ahịa iji nzacha, mee ka ọ dịkwuo mma, ma ọ bụ jikọta mgbakwunye data. Naanị ndị na-ere ahịa ole na ole nwere amamihe na nka iji dee, nwalee, na dezie ajụjụ SQL n'onwe ha, na-eme ka usoro nkewa na-ewe oge (ya mere ọnụ) na-adịkarị mfe na njehie. O yikarịrị ka ọ dị na ụlọ ọrụ ọ bụla bụ na ngalaba ahịa na-adabere na nkwado teknụzụ n'ime ma ọ bụ n'èzí iji jikwaa data ha na SFMC.
DESelect bụ ọkachamara n'inye azịza inye aka data ahịa maka Salesforce AppExchange. Ngwọta mbụ ịdọrọ na dobe ya, DESelect Segment bụ nke emepụtara maka ndị na-ere ahịa na-enweghị ahụmịhe koodu, na-enyere ha aka ibuga ngwa ahụ ozugbo n'ime nkeji ole na ole nke nrụnye ka ha wee nwee ike bido ozugbo site na ngalaba nke ndị ebumnuche ha. mkpọsa. Site na ngalaba DESelect, ndị na-ere ahịa agaghị ede otu ajụjụ SQL.
DESelect nwere ọtụtụ ngwọta dị njikere iji bulie ROI na Salesforce Marketing Cloud maka ụlọ ọrụ:
Họrọ ngalaba na-enye atụmatụ nkewa kensinammuo ma dị ike site na nhọrọ. Nhọrọ na-enye ndị ọrụ ohere ijikọ isi mmalite data wee tinye nzacha iji mepụta akụkụ n'ụzọ na-ewepụ mkpa maka ajụjụ SQL. Ekele maka ngwá ọrụ ahụ, ndị ọrụ nwere ike ịrụ ọrụ nkewa na SFMC 52% ngwa ngwa ma malite mgbasa ozi ha ruo% 23 ngwa ngwa, ebe ha na-aga n'ihu na-eji ọtụtụ ohere nke Marketing Cloud na-enye. DESelect na-enyere ndị na-ere ahịa aka ikewa, lekwasịrị anya, na hazie nkwukọrịta ha n'adabereghị (na-enweghị mkpa nke ndị ọkachamara si mpụga) yana nwee ike imepụta ihe karịa mgbe ọ bụla.
Họrọ Jikọọ bụ usoro ntinye data ahịa nke na-enyere ndị ọkachamara n'ahịa ahịa aka ịchekwa oge site na ijikọta na idobe isi iyi data ọ bụla site na webhooks (API) ka Salesforce Marketing Cloud na / ma ọ bụ Salesforce CDP na azụ, na-eji ihe ọ bụla ma e wezụga ịdọrọ-na-dobe atụmatụ. N'adịghị ka nnukwu ngwa ntinye aka, DESelect Connect e wuru maka ndị na-ere ahịa na-arụ ọrụ nke ọma, na-eme ka ọ dịkwuo mfe, na ọnụ ala dị ala ma e jiri ya tụnyere ngwọta ndị ọzọ, ma dị mfe iji. Dị ka ngwaahịa DESelect niile, Jikọọ anaghị achọ oge nkwụsịtụ maka nrụnye ma ọ bụ nhazi, naanị ị ga-agbanye na-egwu. Nke kachasị mkpa, ọ chọghị nnabata onwe ya ma jiri oke SFMC mee ya na ọnụọgụ oku API.
Họrọ Chọọ abụghị ihe ọhụrụ, ọ dịla ma ka dị ka Chrome Extension iji nyere ndị na-ere ahịa aka ịchọ ihe ọ bụla na igwe ojii ahịa ha ngwa ngwa. Ogwe ọchụchọ agbakwunyere nke ọma na-enye gị ohere ịchọ ndọtị Data, gụnyere:
Onye ọrụ na-eziga
Ihe omume ajụjụ
N'ọnwa a, DESelect weputara Chọọ n'ime AppExchange. Mkpebi itinye ngwaahịa a n'ahịa Salesforce bụ n'ihi ọchịchọ a ma ama sitere n'aka ndị ọrụ na-arụ ọrụ na otu na-akwadoghị mgbakwunye chrome. Ugbu a, onye ọrụ Cloud Marketing ọ bụla na-enweta uru nke ngwa ọrụ enyi na-echekwa oge.
Họrọ atụmatụ akụkụ
Jikọọ mgbakwunye data ọnụ - Ndị ọrụ nwere ike iji ịdọrọ-na-dobe iji jikọta mgbakwunye data ọnụ ma kọwaa otu esi ejikọta ha. Ndị nchịkwa nwere ike ịkọwapụta mmekọrịta ndị a.
Wepụ ndekọ - Dị ka ịbanye na mgbakwunye data, ndị ọrụ nwere ike igosi ndekọ ha chọrọ iwepụ na nhọrọ ha.
Tinye isi mmalite data – Ọ dị mfe na Họrọ iji tinye kọntaktị sitere na isi mmalite data dị iche iche ọnụ.
Tinye usoro nzacha - Ndị ọrụ nwere ike itinye ọtụtụ nzacha n'ofe ndọtị data na isi mmalite, na-akwado ụdị mpaghara niile.
Mee ngụkọta - Subquestries na-enye ohere maka nchịkọta data na ịrụ ọrụ nke ịgbakọ, dị ka ego ole onye ahịa zụrụ ma ọ bụ ego ole onye ahịa mefuru.
Hazie na njedebe nsonaazụ - Ndị ọrụ nwere ike hazie nsonaazụ ha na mkpụrụedemede, ụbọchị, ma ọ bụ ụzọ ọ bụla ọzọ nwere ezi uche. Ha nwekwara ike belata ọnụ ọgụgụ nsonaazụ ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa.
Kọwaa ma jiri listi ọkpụkpọ - Ndị ọrụ nwere ike kenye ụkpụrụ picklist na akara dị ka onye nchịkwa, na-enyere ndị otu ha aka ịzacha nke ọma.
Tọọ ụkpụrụ ntuziaka ma ọ bụ ụkpụrụ dabere - Ndị ọrụ nwere ike hazie nsonaazụ ha, site na ịtọ ụkpụrụ ntuziaka ma ọ bụ ụkpụrụ dabere, dịka ọmụmaatụ, Female aghọ Miss na Nwoke aghọ Mister.
Dekọọ ndekọ nwere iwu - Enwere ike iwepụta ihe ndekọ site na otu iwu ma ọ bụ ọtụtụ, nyere ụfọdụ mkpa.
Jiri akụkụ nke nsụda mmiri – Ndị ọrụ nwere ike tinye iwu cascading iji 'mmiri mmiri segmentation'.
Họrọ akụkọ ịga nke ọma
Ugbu a, ụdị ụwa dị ka Volvo Cars Europe, T-Mobile, HelloFresh na A1 Telekom tụkwasịrị obi DESelect. Amụma ụlọ ọrụ nke idobe mmekọrịta chiri anya na ndị ahịa ya ebe ọzụzụ na nkwado raara onwe ya nye na mbido mbụ, n'agbanyeghị na ngwa ahụ dị njikere site na ụbọchị nrụnye, enyela ohere maka akụkọ ịga nke ọma na-aga n'ihu.
Ọmụmụ ihe gbasara Emerald: Edebere California emerald bụ onye na-arụ ọrụ nke ihe omume B2B dị ndụ na imikpu na ihe ngosi azụmaahịa. Tọrọ ntọala na 1985, ika a na-eduga ahịa ejirila ndị ahịa 1.9 nde gafee mmemme 142 yana akụrụngwa mgbasa ozi 16.
Emerald malitere n'oge na-adịbeghị anya iji SFMC. N'oge na-adịghị ka ha ji ígwé ojii ahụ, ndị otu akpaaka ha na-ere ahịa achọpụtala etu enwere ntụkwasị obi siri ike na ajụjụ SQL na-enweghị ngwọta enyi na enyi maka ndị ahịa na-enweghị nka SQL. Ha chọtara emezighị emezi n'ịwulite mgbasa ozi data tupu oge eruo ma gbalịsie ike na enweghị ike ịkọwapụta mpaghara niile n'ọdịnihu.
Tupu iji DESelect, ndị na-ere ahịa Emerald enweghị ohere nchekwa data, n'ihi na ndị otu etiti ha arụgoro akụkụ mbụ. DESelect nyeere Emerald aka n'ịkwalite ndị otu ahịa ya ịnweta na jikwaa data niile mgbe ha na-eke akụkụ nke ọma, yana onwe ha. Ugbu a, ha na-eleba anya n'ịwepụta DESelect nye ndị na-ere ahịa n'onwe ha iji mee ka ndị ọrụ SFMC ha nwee ike kpamkpam.
DESelect abawanyela arụmọrụ site na 50%. Ọ dị mfe ime ihe ad-hoc ugbu a.
Gregory Nappi, Sr. Director, Data Management & Analytics na Emerald
Iji mụtakwuo otu esi eme ya Họrọ nwere ike inyere nzukọ gị aka:
Gaa na DESelect Hazie DESelect ngosi
Tags: a1 telekomAPIịgbanweesearch akpaakachrome ndọtịsearch ọdịnayadata ndọtịnjikọ ndọtị datankebi ndọtị dataahọrọlaemail na-eziga ọchụchọọchụchọ template emailemail ndebiriemeraldachọ nkọwapụtagoogle chrome ndọtịGregory NappiNdewoọchụchọ omume ajụjụsearch ajụjụndị ahịaire ere ahịasalesforce cdpsalesforce ahịa ojiisfmct-mobileỤgbọ ala Volvo Europe
Otu esi eme ka nsuso UTM Google Analytics akpaaka na ahịa ahịa ahịa Salesforce